Ireo tambajotran’ny mpanodinkodina omby halatra ireo no saron'ny zandarimariam-pirenena Ambohimanga Rova. Halatra omby 3 nisesy tao amin'ny fokontany Ambohidahy, kaominina Ambohimanga Rova, Avaradrano ny alin'ny 10 hifoha 11 mey teo no niaingan’ny fanadihadiana. Andian-jiolahy tsy nitondra basy fa nampiasa torabato mba hampitahorana ny tompon'omby izay jiolahy ihany no nanao ny fanafihana tamin'ny 8 ora sy sasany alina. Adiny telo taorian'izay vao naheno ny mpitandro filaminana. Rehefa nantsoina ny tompon'omby nanara-dia dia tsy nandray telefaonina. Roa andro taorian'ny halatra dia tafaverina ny omby 2, izay marihina fa ny tompony ihany no naka azy tany amin'ny mpangalatra.
Taty aoriana,vokatry ny angom-baovao dia fantatra fa mpinamana ihany izy ireo. Vokatry ny valifaty noho ny tsy fahavitan'ny tompon'omby ny vola vidin'omby halatra teo aloha no nahatonga ny fanafihana. Tao anatin'ny fanadihadihana no nahitana fa omby tsy mazava avy amina faritra maro any avaratra ny renivohitra ireo omby namidin'ny mpanafika. Ity tompon'omby ihany kosa no mitady lalam-barotra hivarotana ny hena. Lafo ny hena vao aloa ny vola. Vokany, tambajotra izay misy ny mpandroaka ny omby halatra, ny mpividy ary ny mpivarokena no tratra, ka ny tompon'omby no ivo mampihodina io asa ratsy io. Miisa 5 ireo voasambotra ary mbola misy roa karohana.